Passion နောက်ကို အမြဲလိုက်သင့်လား? – How She Did It
Passion နောက်ကို အမြဲလိုက်သင့်လား?
BlogPopular Articles |4mins
အခုလောက်ဆိုရင်တော့ passion ဆိုတာကို ကြားဖူးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်မတို့ How She Did It မှာလည်း ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မိခင်တွေအတွက်ရော၊ ဖခင်တွေအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး ရေးထားတာရှိတယ်။ Passion ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်ရှိသင့်လဲဆိုတာတွေလည်း ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတလောမှ passion နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လွဲနေတာလေးတစ်ခုကို သတိထားမိတယ်။
Passion ရှာပါ၊ passion ကိုအခြေခံတဲ့ အလုပ်အကိုင်/စီးပွားရေးကိုလုပ်ပါ၊ Passion ပါရင် အောင်မြင်တယ် စသဖြင့်ပြောတဲ့အခါ လူငယ်တွေအတွက် motivate ဖြစ်ပေမယ့်၊ ကျွန်မတို့ မိဘတွေဖြစ်သွားပြီးဆိုတဲ့ လူလတ်ပိုင်းနဲ့လူကြီးပိုင်းတွေအတွက်ကျတော့ လက်တွေ့မကျဘူး၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်းလိုက်တာလို့ မြင်တဲ့အတွက် demotivate ဖြစ်စေတယ်၊ စိတ်ဓါတ်ကျစေတယ်။ တစ်ချို့ဆို စိတ်တောင်ဆိုးတယ်၊ passion ပဲပြောနေတယ် စားဝတ်နေရေးပြေလည်အောင် မစဉ်းစားပဲ၊ စိတ်အလိုလိုက်ခိုင်းနေတယ်လို့ပြောကြတယ်။ သူတို့ပြောတာလဲမမှားပါဘူး။ ကျွန်မတို့အရွယ်က လက်တွေ့ကျတာတွေကိုဦးစားပေးရမယ့် အရွယ်တွေလေ။ ကိုယ့်မှာတာဝန်တွေရှိတယ်၊ ကိုယ့်ကိုမှီခိုပြီးရပ်တည်နေတဲ့ ကလေးတွေရှိသလို၊ သက်ကြီးရွယ်အိုမိဘတွေလဲရှိတယ်။ လက်တွေ့မကျရင် ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူး၊ မလုပ်နိုင်ဘူး။
ဒါကြောင့် passion ကိုလက်တွေ့ကျကျအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပြီး ကိုယ့်အတွက်နားလည်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ သူများတွေ passion ဆိုတိုင်း ကိုယ်ကတကောက်ကောက် လိုက်မလုပ်သင့်ဘူး။ …. ဒါဆို passion နောက်ကို မလိုက်သင့်ဘူးလား? ကိုယ့်အသက်အရွယ်အတွက် နောက်ကျသွားပြီလား? ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အိပ်မက်တွေ မေ့လိုက်ရတော့မှာလား? … ကျွန်မရဲ့အဖြေကတော့ passion ကိုအခြေခံဖို့လိုတယ်၊ ဒါပေမယ့် passion တစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးဘူး။ အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခု/အလုပ်အကိုင်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့အချက်သုံးချက်ဖြစ်တဲ့ Passion, Skills, Value စတဲ့အရာတွေ ညီတူညီမျှပါဝင်ဖို့လိုတယ်။ ဒါကို Career Success Triangle လို့လဲ career counselor တွေ/ executive coach တွေက ခေါ်ဝေါ်အသုံးပြုကြတယ်။ တြိဂံလေးရဲ့ ထောင့်သုံးထောင့်တစ်ခုချင်းမှာ Passion, Value, Skills ဆိုတာရှိတယ်။ ကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်မှုရော၊ စိတ်ကျေနှပ်မှုရောပေးနိုင်တဲ့ အလုပ်ဟာ တြိဂံလေးရဲ့ အလယ်မှာရှိနေနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မခဏခဏကြားနေရတဲ့ passion နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အလွဲလေးတွေက ဘယ်ကလာလည်းဆိုတော့ Skills နဲ့ Value ကိုထည့်စဉ်းစားရမှန်းမသိကြလို့ တစ်ဖက်စွန်းရောက်သွားကြလို့။
ဒါဆို ကိုယ့်တြိဂံလေးကို ဘယ်လိုဆွဲမလဲ?
Passion ဆိုတာ စိတ်ကိုနှစ်ပြီးအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ အချိန်တွေ ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းမသိဘူး၊ ဒါလုပ်နေရရင် ထမင်းစားဖို့မေ့တယ်။ ဘယ်နှစ်ခါပြန်ပြင်ပြီးလုပ်ရလုပ်ရ စိတ်ပါဝင်စားစွာလုပ်နိုင်တယ်၊ အခက်အခဲတွေရှိနေလည်း အချိန်ပေးပြီးလုပ်တယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီအလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီး ချစ်တယ်။ Passion ကိုအခြေခံတဲ့အလုပ်/စီးပွားရေးတွေအောင်မြင်နိုင်တာက အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အမြဲလုပ်လို့။ ဘယ်သူတိုက်တွန်းလို့မှမဟုတ်၊ ငွေကြေးမက်မောမှုကြောင့်လဲမဟုတ်ပဲ အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရရင်ကို ပျော်တယ်၊ ကျေနှပ်နေတတ်တယ်။ ဝါသနာနဲ့မတူတာက Passion ရှိတယ်ဆိုရင် ပင်ပန်းလဲလုပ်တယ်၊ မအားတဲ့ကြားက အချိန်ပေးပြီးလုပ်နေတယ်၊ ဒါကြောင့် ဇွဲရှိတယ်။
ဒါပေမယ့် Passion တစ်ခုတည်းနဲ့ လုံးဝရပ်တည်လို့မရဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိပေမယ့် အဲ့ဒီအလုပ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းဆိုတာမရှိရင် ဒီအလုပ်မှာ အောင်မြင်ဖို့ ခက်ခဲလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် Skills ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အချက်အချက်တစ်ချက် အနေနဲ့ ထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ ကျွန်မတို့လူလတ်ပိုင်းရောက်လာတဲ့သူတွေအတွက် အားသာချက်လေးက အလုပ်အတွေ့အကြုံ၊ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကနေ အရည်အချင်းနဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ဆိုတာ အနည်းနဲ့အများ ရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်လဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်တွေမှာ စိတ်ကိုနှစ်ပြီးလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကို သိပြီးသွားရင် အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ ကိုယ့်မှာအရည်အချင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ အရည်အချင်းများများရှိပြီးသားဆိုရင် ဒီအလုပ်မှာ အောင်မြင်နိုင်ဖို့ပိုသေချာနိုင်သလို၊ အရည်ချင်းနဲနဲပဲရှိသေးတယ်၊ skill gap တွေသိပ်များနေတယ်ဆိုရင် ဒီလုပ်ငန်းကိုချက်ချင်းမစတင်ပဲ လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတွေဖြည့်ဖို့လိုတယ်။
ဒါဆို နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Value ကရော ဘာကြောင့် ထည့်စဉ်းစားဖို့လိုနေပြန်လဲ? Value ဆိုတာ တန်ဖိုး၊ ကိုယ်လုပ်မယ့်အလုပ်က လူတွေရဲ့ဘဝကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်လား၊ မြင့်တင်ပေးနိုင်လား။ မြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို/ကိုယ့်အလုပ်ရဲ့ရလာဒ်ကို လူတွေတန်ဖိုးထားတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုအလုပ်ခန့်တယ်၊ ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုအားပေးတယ်၊ ကိုယ့် products/services တွေကို ဝယ်ယူတယ်။ Value နဲ့ Passion ကိုမျှတနိုင်တဲ့အခါ ကိုယ်စိတ်အားထက်သန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်က တကယ်ပဲကိုယ့်ကို စားဝတ်နေရေးပြေလည်စေတဲ့အလုပ်ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ ကိုယ့်အတွက်ပဲစိတ်ကျေနှပ်မှုပေးတာမဟုတ်ပဲ၊ လူတွေကိုလည်း စိတ်ကျေနှပ်မှုပေးနိုင်တယ်။ အလုပ်လုပ်နေသူအများစုက Value နဲ့ Skills ဖက်ပိုရောက်နေတဲ့အခါ အလုပ်မှာကျွမ်းကျင်ပါတယ်၊ လူတွေကိုအကျိုးပြုလို့ ဝင်ငွေလဲရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်စိတ်ကျေနှပ်မှုမရတဲ့အတွက် အလုပ်မှာမပျော်ဘူး။
အသက်ကြီးတာငယ်တာ၊ အမျိုးသမီးအမျိုးသားမရွေး ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အလုပ်ကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုချင်ကြတာပါပဲ၊ ဒါဟာ လူတိုင်းရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို Dream Career ဆိုတာ စိတ်ကျေနှပ်မှုတစ်ခုတည်းမှာပဲ မမူတည်နေဘူး။ ဒါကြောင့် အခုချိန်မှာ အဆင်ပြေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရပေမယ့် ဒီအလုပ်ကနေ Skills တွေအများကြီးရလာနိုင်တယ်၊ ဒီလိုကြိုက်တဲ့အလုပ်ရော မကြိုက်တဲ့အလုပ်ရော လုပ်ရင်းနဲ့ ရလာတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကနေ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ တန်ဖိုးကိုနားလည်လာမယ်။ ဒီတြိဂံလေးကို ခေါင်းထဲမှာ ပုံဖော်ကြည့်ပါ၊ စာအုပ်လေးထဲမှာချဆွဲကြည့်ပါ။ ဒီတစ်ခါဆွဲတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ တြိဂံလေးက Skills ဖက်ကိုစောင်းချင်စောင်းနေမယ်၊ နောက်တစ်နှစ်ကြာဆွဲတဲ့အခါ Passion ဖက်ပိုရောက်သွားနိုင်ပြန်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ Dream Career ရဖို့ မျှတအောင် တဖြည်းဖြည်းချင်းပုံဖော်လာနိုင်ဖို့လိုတယ်။
စာဖတ်သူတွေရော Passion, Skills, Value မှာ ဘာတစ်ခုက အားလျှော့နေလဲ?
Passion အကြောင်း ဖတ်ချင်ရင် –
မိခင်တွေဘာကြောင့် passion အတွက်အချိန်ပေးသင့်လဲ?
ဖခင်တွေဘာကြောင့် passion အတွက်အချိန်ပေးသင့်လဲ?